Converter Audio: Beddelaan u dhexeeya oo dhan qaabab loo jecel yahay audio
> Resource > Music > Audio Converter: Beddelaan u dhexeeya oo dhan qaabab loo jecel yahay audio
Beddelaan audio ciyaartoyda audio caan ah sida iPod classic, iPod taabto, Zune, iyo cayn kasta oo kale ciyaartoyda MP3. Bixi> 300% diinta xawaaraha, si fasqt ka baxsan imaginatio. Beddelaan u dhexeeya qaababka audio caan ah oo ay ka mid yihiin badalo MP3 in AAC, diinta WMA in MP3, diinta regelingen in MP3, diinta MP3 in MKA, diinta wma in OGG, diinta audio in AAC, M4A, daanyeer, AIFFetc. U ogolow inaad la qabsato heerka yara audio, channel audio, heerka muunad iyo ha aad xulan encoder maqal ah.
1 Load audio files
Free download Wondershare Audio Converter, rakibi iyo waxa maamula. Guji "Beddelaan" tab iyo dooro "Add Files" fursad u keeno files audio aad rabto in aad si loogu badalo in ay qaabab kale aad doonayay audio.
2 Dooro qaab saarka audio aad rabto in aad ku
Hadda, waxaad u baahan tahay in ay doortaan mid ka mid ah qaababka aad doonayay audio ee liiska qaabka wax soo saarka. Waxaad laba siyaabood oo kala duwan si uu u furo liiska. Mid ka mid ah waa in guji liiska qaab hoos-hoos ee "Qaabka Output" window, kan kale waa in guji image qaab ee "Qaabka Output" Murayaad. Markaas tagaan "qaab"> "Audio" category. Halkan, waxaad ka heli kartaa dhammaan qaababka audio caan ah, oo kaliya ay doortaan waxa aad rabto.
3 Edit iyo clip videos (Ikhtiyaar)
Haddii aad rabto in aad wax ka bedel hor diinta audio, taas Converter Audio bixisaa function awood audio tafatirka, oo ay ku jirto jaritaanka, goynta iyo biirtay clips audio iwm
4 audio in ay diinta ka audio Bilow
Guji "Beddelaan" badhanka si ay u bilaabaan diinta aad files audio in qaab kale oo maqal ah. A bar horumarka diinta la soo bandhigi doonaa inta ay socoto. Markii diinta la sameeyo, waxaad riixi kartaa "Folder Open" in la helo files audio gediyay.
Features Key ee Wondershare Converter Audio
Beddelaan u dhexeeya oo dhan qaabab loo jecel yahay audio
Beddelaan Cajalado kala duwan oo caan ah ciyaartoyda audio oo aan wax khasaaro audio.
Waraaqda oo badalo audio ka dhowaad dhammaan video files.
Diinta Dufcaddii Support si loogu badalo ka badan hal file maqal ah waqti.
Beddelaan Cajalado la super si degdeg ah xawaaraha diinta.
Edit files audio
Jar file maqal ah si dhererka kasta oo aad rabtid.
Goo aad clips audio aan la rabin
Midowdo clips audio badan xulay galay mid ka mid file.
Saamayn audio Kulanka Xiisaha Leh hor diinta.
Taageerada Free Farsamada iyo Updates u Lifetime
Saacadood Online 7X24 taageero e-mail farsamo.
Auto-jeeg casriyeysan ay hubisaa in aad ka hesho nooca ugu dambeeya ee barnaamijka markii ugu horeysay.
Sida loo dar Audio in MKV
Torrent Download Software u Devices
Top 5 Softwares in Download Free Mp3 Soundcloud
Top 10 Film laxamiistaha oo ay caan ku music Qadiimiga ah
Sida loo Download Music Online
Toogashooyin Dhibaato ku saabsan music kala iibsiga ka Lugood in iphone